Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba ezihlaziyiweyo » Umseki wePizza kaPapa uJohn Akonwabanga ngokuRebranding
Ukuphendula kwisibhengezo esivela kuPapa John's International, Inc. sokuba balungisa uhlobo lwenkampani kunye nokwakheka kwevenkile, umseki nowayesakuba nguSihlalo kunye neCEO uPapa John Schnatter ukhuphe le ngxelo ilandelayo.
"Namhlanje, uPapa John's ubhengeze utshintsho oluninzi kuphawu kunye noyilo lwevenkile. Ngelixa iibrendi ziguquka ngokuhamba kwexesha ukuhlangabezana nemfuno yemarike, kuyavuyisa ukubona ukuba uninzi lweengqikelelo esiziphuhliseyo kwiminyaka engama-34 - kubandakanywa izithako ezikumgangatho ophezulu, inkonzo yabathengi, imibala yelogo, iziqubulo, kunye nokunye - zisaxhasa impumelelo yenkampani. Ndinethemba lempumelelo eqhubekayo yabathengi, uninzi lwabo ndibazi kakuhle.
I-apostrophe enezinto ngoku ayisekho kwinto eyayifudula iyiyo “kaPapa John”. (ngokusesikweni Papa John's International Inc. (Nasdaq PZZA)).
Olo inokuba lukhetho loyilo kodwa lelinye inyathelo lenkampani izahlula kumseki wayo, uJohn Schnatter - ohambe kuqhekeko olubi nenkampani.
"Ukugxeka kwam abaphathi benkampani kule minyaka mithathu idlulileyo kuxhomekeke ikakhulu ekwaleni kwabo ukuvuma ukuba babengalunganga malunga nengxelo yeendaba zobuxoki malunga nam kunye nelifa lam, kunye nokusilela kwabo ukugcina ukuzinikela kwimigaqo esakhe kuyo uphawu lwenkampani. , kubandakanya umgangatho wemveliso ongaguqukiyo ngayo yonke ipizza eyenziweyo.
“Ngokuqwalasela umanyano oluhlala luhleli lukaPapa John nolu phawu, utshintsho lwenkampani kwilogo namhlanje alufani. Endaweni yokuba uthe phithi nguPapa uJohn kunye notshintsho olungenamsebenzi kwilogo yebhrendi, inkampani kufuneka ithathelwe ingqalelo kwakhona ngokwenza ipizza esemgangathweni kaPapa John rhoqo. Nokuba bazama kangakanani na, abanakufumana ekaPapa John ngaphandle kukaPapa John.”